Arteta oo u jawaabay Henry wuxuuna fariin u diray taageerayaasha Arsenal kahor kulanka Crystal Palace – Gool FM - Idman news
Arteta oo u jawaabay Henry wuxuuna fariin u diray taageerayaasha Arsenal kahor kulanka Crystal Palace – Gool FM
(London) 15 Ok 2021. Tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta ayaa sheegay in kooxda ay awood u leedahay inay sameyso wax ka fiican sidii ay sameysay ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League, kaddib markii ay kaga biloowdeen qaab niyadjab ah.
Gunners ayaa haatan ku jirta kaalinta 11-aad, iyadoo leh 10 dhibcood, kaddib markii ay badisay 3 kulan iyo hal barbaro ah, waxayna natiijooyinka taxanaha ah ee wanaagsan ay yimaadeen, kaddib markii 3 guuldarro oo xiriir ah ay la kulmeen saddexdii kulan ugu horreysay Premier League.
Halyeeyga Gunners Terry Henry ayaa muujiyay walaaciisa ku aadan waddada ay kooxda mari doonto, isaga oo farta ku fiiqay su’aasha ah haddii arrimuhu ugu socon doonaan jihada saxda ah ee Arteta, sidoo kale Henry ayaana carrabka ku adkeeyay in kooxda ay dhibtootay ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka Premier League ay la ciyaareen Brighton.
Haddaba shabakada “Sky Sports” ayaa soo xigatay wareysi uu bixiyay Tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Hadalkii Henry? Adiga uun baan kaa maqlaa, taasi waa fikrad kale waana inaan ixtiraamnaa.”
Mikel Arteta ayaa fariin gaar ah u diray taageerayaasha Gunners kahor kulanka Crystal Palace, kaasoo lagu qaban doono Emirates Stadium Isniinta soo aadan, xilli kooxda ay wajahayaan uu tababare u yahay halyeeyga Gunners ee Patrick Vieira.
Macalinka reer Spain ee Mikel Arteta oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri:
“Patrick Vieira waa halyeeyga Arsenal, waxaan rajeynayaa inuu helo soo dhaweynta uu u qalmo, marka loo fiiriyo wixii uu sameeyay ciyaaryahan ahaan iyo shaqsi ahaanba.”
Gool Fm News
Previous “Kylian Mbappé wuxuu doonayaa kaliya inuu matalo Real Madrid” – Wargeys Spain ah – Gool FM
Next Mbappé dartiis… Real Madrid oo qorsheyneysa inay lasoo saxiixato laacibkan – Gool FM
Barcelona oo wada hadallo la billawday Man City oo ay kaga dooneyso xiddig muhiim ah – Gool FM
44 mins ago Mohamoud
“Waxaan kula taliyay Mbappe inuu ku biiro Real Madrid” – Zlatan Ibrahimović – Gool FM
Chelsea oo diyaar u ah inay labo ka mid ah xiddigaheeda ka iibiso Kooxda Barcelona – Gool FM
8 hours ago Mohamoud
Laba kursi oo miisaan culus oo go’aamin doona mustaqbalka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada
48 mins ago Mohamoud
Ford responds to AG report on small business grants given to ineligible businesses
Laba kursi oo miisaan culus oo go’aamin doona mustaqbalka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada December 1, 2021
Ford responds to AG report on small business grants given to ineligible businesses December 1, 2021
OSC failed to alert public to many potentially risky investments: auditor general report December 1, 2021